lungisa uxhumano kumadivayisi okulalelwayo kwe-bluetooth nezibonisi ezingaxhunywa kugesi ku-windows 10 – Ukusekela Windows 10
Ukusekela Windows 10
Windows 10 usizo blog
lungisa uxhumano kumadivayisi okulalelwayo kwe-bluetooth nezibonisi ezingaxhunywa kugesi ku-windows 10
Lungisa uxhumano kumadivayisi okulalelwayo kwe-Bluetooth nezibonisi ezingaxhunywa kugesi
Uma ucindezela inkinobho ethiInkinobho yokuxhuma kusikhungo sesenzo ayiyitholi idivayisi yakho, zama okulandelayo:
Qiniseka ukuthi idivayisi yakho ye-Windows iyayisekela i-Bluetooth nokuthi ivuliwe. Uzobona inkinobho ye-Bluetooth kusikhungo sesenzo.
Uma ungayiboni inkinobho ye-Bluetooth, zama ukubuyekeza idrayiva yedivayisi yakho. Nansi indlela yokukwenza: Iya kokuthi Qala, faka okuthi Umlawuli Wedivayisi, kukhethe ohlwini lwemiphumela, bese kuthi, kokuthi Umlawuli Wedivayisi, thola idivayisi yakho, yiqhafaze kwesokudla (noma cindezela bese uyabamba), khetha okuthi Buyekeza Isofthiwe Yedrayiva, khetha okuthi Cinga ngokuzenzakalelayo isofthiwe yedrayiva ebuyekeziwe, bese ulandela zonke ezinye izinyathelo.
Uma i-Bluetooth ivuliwe, futhi idrayiva ibuyekeziwe, kodwa idivayisi yakho iqhubeka nokungasebenzi, zama ukukhipha idivayisi bese uyayibhangqa futhi. Nansi indlela yokukwenza: Iya kokuthi Qala, faka okuthi Amadivayisi, khetha okuthi I-Bluetooth, khetha idivayisi, khetha okuthi Khipha idivayisi, bese uzama ukubhangqa futhi.
Qiniseka ukuthi idivayisi yokulalelwayo evumela i-Bluetooth ivuliwe nokuthi iyatholakala. Indlela owenza ngayo lokhu iyehluka ngamadivayisi, ngakho hlola ulwazi oluze nedivayisi yakho noma iya kuwebhusayithi yomkhiqizi.
Qiniseka ukuthi idivayisi yakho ye-Windows isekela i-Miracast ngokuhlola ulwazi oluze nayo noma ngokuya kuwebhusayithi yomkhiqizi.
Qiniseka ukuthi i-Wi-Fi ivuliwe.
Qiniseka ukuthi isibonisi ofuna ukusisebenzisa sisekela i-Miracast nokuthi sivuliwe. Uma singayisekeli, uzodinga i-adaptha ye-Miracast (ngezinye izikhathi esibizwa ngokuthi “idongeli”) exhunywa kumbobo ye-HDMI.
Qiniseka ukuthi idivayisi yakho ye-Windows isekela i-WiGig nokuthi ivuliwe. Uma i-PC yakho isekela i-WiGig, uzobona inkinobho ye-WiGig kokuthi Amasethingi > Inqubo yendiza.
Qiniseka ukuthi isibonisi sisekela i-WiGig. Uma singayisekeli, uzodinga idokhi ye-WiGig.
Previous Previous post: ngidinga yiphi ihadiwe ukuze ngiqophe iziqeshana zomdlalo we-xbox ku-pc yami?
Next Next post: indlela yokusebenzisa ideskithophu ekude
helppane.exe Ukwelekelelwa nokuSizwa kwe-Microsoft
winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows
DataExchangeHost.exe Umsingathi Wokushintshana Ngemininingwane
mshta.exe I-Microsoft (R) HTML Application umnininhlangano
thola ukusekela nge-app yomculo i-groove
Chelsea on indlela yokuthola usizo ku-windows 10
Shairacas on indlela yokuthola usizo ku-windows 10
Ukusekela Windows 10 Proudly powered by WordPress